I-Ultrasonics kuVinegar Ukukhiqiza nokuguga - iHielscher Ultrasound Technology
Iviniga, efana ne-balsamic iyimfuneko ebalulekile ekhiqizweni. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa izinqubo eziningi ekukhiqizeni nasekuvuthweni kweviniga.
Ingemuva kokukhiqiza uviniga
Ukukhiqizwa uviniga, ikakhulukazi imikhiqizo ephezulu, njenge-balsamic iviniga, inqubo yokukhiqiza isikhathi esiningi. Iviniga liyi-acidic liquid eyenziwa yi-oxidation noma ukuvuthwa okungcono kwe-ethanol. Umama weviniga, into egcwala i-cellulose nama-acetic acid amabhaktheriya, enza uviniga uphenduke utshwala ube yi-acetic acid nge-oxygen. Le nqubo ye-oxidation ikhiqiza i-asidi enikeza uviniga isiphuzo sayo esimnandi nesiphunga kancane. Ukusabela kwamakhemikhali jikelele ngama-acetic acid bacteria (i-acetobacteraceae) ngu:
I-actic acid yokuhlushwa ihluka phakathi kuka-4 no-8% we-vinegar etafuleni futhi ikhuphuka kufike ku-18% yokunquma uviniga.
Imiphumela ye-Ultrasonic kuVinegar
I-ultrasonics ingasetshenziswa ekwakheni uviniga ngezinhloso ezehlukene. Yonke imiphumela kungaboniswa kalula ngokubonisa isampula kaviniga ngamasekhondi ambalwa.
Ukunambitheka Okuncane Nokuncane Okuncane
Esivinini esivunyiwe, i-acidic, ukunambitheka okumuncu kwaba sishisa kakhulu futhi tastier. Lolu hlelo lokusebenza oluthakazelisayo njengoba kunesidingo esikhulu seviniga ebushelelezi engasetshenziswa ekhiqizweni ukwenza ukudla okumnandi okumnandi. Uviniga uyisifiso esithandekayo sokugqoka isaladi, inyama kanye nenhlanzi izitsha, amasoso, kanye nama-dessert. I-grade balsamic ephakeme kakhulu yezinga eliphezulu ibuye isetshenziswe njenge-aperitif noma digestif.
Sonication of Balsamic (UP400S):
Le vidiyo ikhombisa u-Hielscher ultrasonicator UP400S sonication uviniga webhalsamu.
I-Sonication ye-Balsamic Vinegar isebenzisa i-UP400S
Ukuze uhlukanise uviniga ovamile, uviniga uvame ukuvuthwa emva kokuvutshelwa kwe-oxidative ngokufaka izinto ezihlukahlukene zokugcoba, njenge-herbs (isib. I-sage, thyme, i-oregano, i-tarragon, i-rosemary, i-basil), i-ginger, i-chili, noma izithelo (isb. Okusajingijolo, i-blackberry, i-orange, imango, i-lime). I-Ultrasonically isiza isizinda sithuthukisa ukukhishwa kwama-flavour kusuka kwiseli matrix kuya kuviniga. Funda kabanzi mayelana Isizinda se-Ultrasonic.
Ukuqhathaniswa nokuvuthwa kweVinegar
Njengoba ukuvuthwa nokuguga kweviniga emibhokisini yokhuni (njenge cherry, i-chestnut, i-oki, i-mulberry, umlotha noma imiphongolo yemjunipha) iyindleko kakhulu futhi ikhululekile, uviniga uvame ukukhiqizwa ngamathangi epulasitiki. Ukulingisa ukunambitheka okwenziwe ngamapulangwe okuvuthwa komgqomo, okuyinto ejwayelekile kumviniga wekhwalithi ephezulu, abakhiqizi beviniga bangezela i-oak powder noma i-oak chips (okuthiwa ‘ukukhishwa okunye okunye') noma ama-distillates enkuni. Ukuthola umphumela owanelisayo we-oak ukunambitheka, ngokuvamile i-chick chips kufanele ihlale okungenani 4 – Amaviki angu-6 kuviniga ukuze uketshezi lungabanjwa yizicabha zokhuni. Ukusetshenziswa kwe-ultrasound kungaba shayela le nqubo ye-oaking ehlukile kakhulu. Ukuviniga uviniga nge-oak add-oak powder noma oak chips, amandla amakhulu kakhulu we-ultrasound kanye ne-cavitation ekhiqizwa yile ultrasonic kusiza isisindo se-oak flavour. I-Ultrasound idala ukucindezela okunye okunye nokucindezela okuphansi okuholela ekudluliseni okuphezulu phakathi kwamaseli esitshalo neviniga. Ngaphezu kwalokho, izinhlayiya ezinhle ze-oak powder zihlakazeka kakhulu emzimbeni wamanzi ngoba i-ultrasound iyindlela ephumelelayo yokuhlakazeka.
I-Ultrasound isembonini yokudla kakade indlela eyaziwayo yokukhipha ama-flavour. Ngamandla akhe amakhulu amakhulu, i-sonication iphula izindonga zeseli futhi yenza izinto zangaphakathi zitholakale. Njengoba izinto zokutshala (izinkuni zokhuni) zihlelwa zibe yizinhlayiya ezincane, izithako ezengeziwe zokunambitheka zizotholakala ezinzulweni zomlimi. Inzuzo yesibili ye-ultrasound iwukuhlakazeka ngokuphumelelayo kwezinhlayiya eziqinile zibe iziphuzo.
Ubuchwepheshe be-ultrasound yindlela ephumelelayo yokumisa, ukuhlakazeka nokuqedwa. Lokhu kuyasiza ekukhiqizeni uviniga uma umbala we-caramel wengezwa kuviniga. Umbala we-Caramel (ukudla okunezelayo e-E150) ungenye yezindala zokudala zokudla okusetshenziselwa ukudala. I-viscous liquid coloring liquid iyasiza ukunikeza uviniga umbala omnyama owufisa.
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics kuviniga ukukhiqiza nokuguga izinqubo kulula. Encane ye-batch scale – kuze kube ngu-2L – ungasebenzisa Amadivayisi we-Ultrasonic Laboratory, njenge- UP400S.
Ukukhiqizwa kokukhiqiza, okunikezwayo kwe-Hielscher Amadivayisi we-Industrial Ultrasonic nge-flow cell reactors, njenge-the I-UIP1500hd. Lezi zinhlelo zisebenza ngokulinganayo, isib. Uma upompa kusuka ku-batch eyodwa kuya kwesinye.
Thintana nathi namhlanje, ukukhuluma ngezidingo zakho zokucubungula! Sizojabula ukukusiza!
Thola Izimpendulo Zemibuzo Yakho!
Sonication of Balsamic (UP400S)
I-Ultrasonics ku-Gourmet Restaurants